Up to date Archives - MM9
အမ်ားျပည္သူ လွဴထားတဲ့ ဆီဗူးေတြကို အိပ္တဲ့ကုတင္ေအာက္မွာ ဘတ္ထားတဲ့လူ ရဲစခန္းက ေခၚသြားျပီေလ …..။
ဘင္းဂလားေဒ့႐ွ္မွာအမ်ားျပည္သူတြက္လႉတဲ့ ဆီေတြကို…အိပ္တဲ့ကုတင္ေအာင္မွာထုတ္မေပးပဲဘတ္ထားတာတဲ့ ခုေတာ့ရဲစခန္းကလာေခၚသြားပီ ေကာင္းထွာလိုစ့္.. ႒,ေနဝဏ္း
အႏုပညာ လုပ္အားခ နဲ႕ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ ဝင္ေငြေလးကို စုၿပီးေတာ့ သားကို အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းထားေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဟန္ျမင့္
အႏုပညာ လုပ္အားခ နဲ႕ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့ ဝင္ေငြေလးကို စုၿပီးေတာ့ သားကို အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းထားေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဟန္ျမင့္ လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ဟန္ျမင့္ရဲ႕သားေလး ေမာင္ေဇာ္နိုင္ထြန္းကေတာ့ ျမန္မာစာနဲ႕ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္တို႔မွာဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။အခုဆိုရင္ေတာ့လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ဟန္ျမင့္ဟာသူရဲ႕သားေလးကိုအႏုပညာလုပ္အားခနဲ႕ အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့မိန္းမရဲ႕ ဝင္ေငြေလးကို စုၿပီးေတာ့သားကို ေက်ာင္းထားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္ […]
ထိုင္း ခ်ဲလ္(၃) လံုးထီ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မွဳ “(ကံေကာင္းၾကပါေစ)။ မၾကည့္အားေသးရင္ ရွယ္ယူထားလိုက္ပါ…..။
By AdminPosted on February 1, 2020 February 16, 2020
ေလာကီပညာကို လိုက္စားၾကေသာ ျမန္မာဆရာမ်ား၌ တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာဆရာအခ်င္းခ်င္း ပညာကို ဖလွယ္ေသာ အေလ့အထ ရွိတတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ တစ္ဦးအား ေပးအပ္ကာ လဲလွယ္ၾကရာ၌ ေရွးဦးစြာ… `မိမိရွာေဖြတတ္သိထားသမွ် ပညာရပ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕မွန္ကန္ေသာ ပညာမ်ားကိုသာေပးပါမည္။ မဟုတ္မမွန္ […]
” ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်း ”… လိမ္မော်သီး အဘအတွက်ပိုက်ဆံသိန်းပေါင်း ၃၅ သိန်းကျော်….
By EditorPosted on January 23, 2020
ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။လိမ္မော်သီးရောင်းတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကို စည်ပင်က ဝန်ထမ်းတွေက သတ်မှတ်နေရာမှာ ဈေးမရောင်းပဲ ရုံးအရှေ့မှာလာရောင်းတဲ့အတွက် ဈေးပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ရုပ်သံဟာ ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်တော့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အတော်လေး စိတ်နာစရာပါ။မြင်သူတိုင်းလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က လူတွေက အချင်းချင်းစုစည်းမိပြီးတော့ […]
မနက်ဖြန်လှူမည့် လိမ္မော်သီး အဘအတွက်တဲ့ အလှူငွေ ၅၅သိန်း ၂ သောင်းကျပ် နှင့် ပါဝင်လှူဒါန်းသူများစရင်း
By EditorPosted on January 22, 2020
လိမ္မော်သီး အဘ အတွက်တဲ့ အဘအတွက် အလှူငွေ ၃၅သိန်း ၂သောင်းကျပ် တိတိ လက်ခံရရှိပါတယ်။ပါဝင်လှူဒါန်းသူအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းဝေး ကြပါစေဗျာ…. နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော် …..Source : Aung Khine Soe […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗဟိုရုံရှေ့မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့သောလိမ္မော်သီးများကို စျေးသည်ရှေ့တွင် ရဲဒင်းဖြင့် ထုရိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် စည်ပင်၀န်ထမ်းသုံးဦးကို စစ်ဆေးအရေးယူရန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပန်းဘဲတန်းမြိုနယ် အမှတ်၂ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စိုးပပလှိုင်ထံမှ သိရှိရသည်။ဇန်န္တဝါရီ ၁၈ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော လိမ္မော်သီးများကိုဖျက်ဆီးသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့က လူမှု့ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဖေ့ဖုတ်ပေါ်တွင် ပျံနှံပြီးနောက် လူထုအကြားစည်ပင်၀န်ထမ်းများကိုဝေဖန်မှု့များစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ […]
ဝမ်းသားစရာ သတင်းကောင်း …အဖိုးအတွက် လိမ္မော်သီးတွေအများကြီးထမ်းလာကြပြီ
ရုံးရှေ့မှာ အသီးလာရောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေက ဖမ်းဆီးကာ ဈေးရောင်းသူရဲ့ ဗန်းထဲက လိမ္မော်သီးတွေကို ဈေးသည်အဖိုးရှေ့မှာပဲ ရဲဒင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင် ဈေးရောင်းတဲ့ ဗန်းကိုပါ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုပ်သံကတော့ ကြည့်ရှုသူတွေကို အော့နှလုံးနာစရာဖြစ်စေပါတယ်။လူလူချင်းအတူတူ ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်နဲ့ […]
ပိုက်ဆံမရှိလို့ ရောင်းစားတဲ့ အဖိုး ရဲ့ လိမ္မော်သီးတွေကိုရက်စက်စွာဖျက်စီးပစ်လိုက်တဲ့မြန်မာစည်ပင်ဝန်ထမ်းများ( ရုပ်သံ )
By EditorPosted on January 21, 2020
Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် မရှိလို့ဈေးရောင်းစားတဲ့သူတွေ ဘဝက သနားဖို့ကောင်းပါတယ်….မရှိလို့လုပ်စားရတဲ့အထဲ တခါတလေကျရင် အဖမ်းအဆီးနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ အရင်းပါပြုတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ရပါတယ်….အခုလည်းပဲ မရှိလို့ဈေးရောင်းစားနေရတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက်ရဲ့ သနားစရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာ အွန်လိုင်းမှာ လူပြောများနေတာပါ…ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ အဘိုးရဲ့ လိမ္မော်သီးတွေကို […]